Bit By Bit - Ethics - 6.4.1 Ukuhlonipha Persons
Ukuhlonipha Persons imayelana ungiphathisa okwengane okufanele icele abantu njengoba ezizimele nasekudumiseni izifiso zabo.
Umbiko weBelmont ubeka ukuthi isimiso sokuhlonipha abantu siqukethe izingxenye ezimbili ezihlukene: (1) abantu kufanele baphathwe njengabazimele futhi (2) abantu abanokuzimela okunciphiselwe kufanele babe nelungelo lokuvikeleka okwengeziwe. Ukuzimela ngokulinganayo kufana nokuvumela abantu ukulawula izimpilo zabo siqu. Ngamanye amazwi, Ukuhlonipha Abantu kuphakamisa ukuthi abacwaningi akufanele benze izinto kubantu ngaphandle kwemvume yabo. Ngokweqile, lokhu kugcina ngisho noma umcwaningi ecabanga ukuthi into eyenzekayo ayinabungozi, noma inenzuzo. Ukuhlonipha Abantu kuholela emcabangweni wokuthi abahlanganyeli-hhayi abacwaningi-bathola ukunquma.
Ngokwenza njalo, isimiso sokuhlonipha abantu siye sahunyushwa ukuthi kusho ukuthi abacwaningi kufanele, uma kungenzeka, bathole imvume evela kwababambiqhaza. Umqondo oyinhloko ngemvume enolwazi ukuthi abahlanganyeli kufanele banikezwe ngolwazi olufanele ngendlela eqondakalayo futhi kufanele bazivumelane ngokuzithandela ukuba babambe iqhaza. Ngamunye wale migomo uqobo uqobo luye lwaba yingxenye yempikiswano eyengeziwe eyengeziwe futhi i-scholarship (Manson and O'Neill 2007) , futhi ngizozinikela isigaba 6.6.1 kuya kwemvume enolwazi.
Ukusebenzisa isimiso sokuhlonipha abantu kulezi zibonelo ezintathu kusukela ekuqaleni kwezahluko eziqokomisa izindawo ezikhathazayo ngamunye wabo. Esimweni ngasinye, abacwaningi benza izinto kubahlanganyeli-basebenzise idatha yabo (Ukuthanda, Izibopho, noma Isikhathi), basebenzisa ikhompyutha yabo ukwenza umsebenzi wokulinganisa (Encore), noma babhalisa ekuvivinyweni (Ukuphikisana Nomzwelo) -ngaphandle kwemvume noma ukuqonda kwabo . Ukuphulwa komgomo wokuhlonipha abantu akukwenzi ngokuzenzakalelayo lezi zifundo zingenakulungiswa; Ukuhlonipha Abantu kungenye yezimiso ezine. Kodwa ukucabanga ngokuhlonipha abantu kuphakamisa izindlela ezithile lapho izifundo zingathuthukiswa khona ngokuziphatha. Isibonelo, abacwaningi bangathola uhlobo oluthile lwemvume evela kubahlanganyeli ngaphambi kokuba isifundo siqale noma siphelile; Ngizobuyela kulezi zinketho uma ngixoxa ngemvume enolwazi esigabeni 6.6.1.